आफ्नै छोरालाई बर्सौ देखि फलामे साङ्लोमा - Charchit Entertainment!
Home bjob fnews आफ्नै छोरालाई बर्सौ देखि फलामे साङ्लोमा
आफ्नै छोरालाई बर्सौ देखि फलामे साङ्लोमा
Charchit Entertainment January 07, 2020 bjob, fnews,
मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिक वडा नं. ९ निवासी ५२ बर्षीय तिलक बहादुर कार्की फलामे साङ्लोमा बाधीएको बषौं भयो ।
बेला बेला होसका बेला बेला बेहोसका कुरा गर्ने मनोरोगी तिलकबहादुरलाई बचाएरै राख्नका लागि फलामे साङ्लीले बाँधेर चाबी लगाई राख्नु पर्ने बाध्यता रहेको तिलकका बुबा दलबहादुर कार्कीले बताए ।
बाँधेर नराखे घर छोडेर हिढने र घरै नफर्कीने भएपछी फलामे साङ्लीले बाध्न बाध्य भएको दलबहादुर बताउँछन । सामान्य कपडा वा डोरीले बाँधे फुकालेर भग्ने गरेको र बाहिर कशैले कुट पिट गर्लान, गाडीले किचेर मार्ला वा कुनै सम्भाव्य दुर्घटना हुन सक्ने डरले बचाउँन र छोरालाई जोगउनकै लागी मन भारी बनाउँदै फलामे साङ्लीले बाँधेर चाबी लगाई राख्नु परेको दुखेसो सुनाए तिलकका ८१ बषीय वृद्ध बुबा दलबहादुर कार्कीले । अहिले पनी तिलकलाई कहिले काही छोप्वा बिराम (मृगी) ले सताउँछ । मृगीले भेटेको बेला दुई चार दिन सम्म खान पिना बिना नै त्यतीकै लडिरहन्छन । घरको अवस्था पनी दयनयि छ । बाँसका खाँबा खुट्टी र टिनलाई बासले च्यापेर बनाएको घर छ ।
बर्खामा परेको पानि घर भित्रै खस्छ । तिलकलाई राख्न छुट्टै कटेरो बनाइएको छ उनी त्यहिं भुइमै बस्छन खान्छन र फलामे साङलीमा बाधीएर सुत्छन । जेठो छोरा तिलक बहादुर लाई ०३४ सालमा मृगीले भेट्यो त्यस पछी पटक पटक धामी लगाएर अलि जाती भएको थियो । तर ०३७ सालमा धामीको पनी मृत्यु भयो त्यस पछी हेलपोष्टको दबाई खुवाएर अलिअलि निको भए पनी पुर्ण निको नभएको दलबहादुरले सुनाए । ०७२ साल देखी घर छोडेर हिँडेको तिनमहिना लगाएर खोजीगरी भेटाएपछी पनी नबाँधी राख्न कोशीस गरें तर बाहिर बाहिर हिँडने र जंगलमै बस्ने घर नफकर्ने भएपछी छोरालाई बाँधेर फलामे साङलीमा चाबी लगाउनु बहेकको बिकल्प नभएको बुबा दलबहादुर काकी बताउँछन ।